In Ka Badan 20 Xubnood Oo DF Laga Dilay Doorashadii Farmaajo Kadib. (Warbixin) – Calamada.com
calamada March 10, 2017 5 min read
Tan iyo markii 08-02-2017 xilka madaxweynaha DF loo doortay Maxamad Cabdullaahi Farmaajo, waxaa magaalada Muqdisho ka dhacay in ka badan labaatan weerar oo lagu dilay masâ€™uuliyiin, saraakiil iyo askar ka tirsan DF.
February13, 2017 Â oo ku aadan afar maalmood uun kadib doorashadiisii ayaa waxaa magaalada Muqdisho lagu dilay oday dhaqameed wax kasoo xulay xildhibaanada Baarlamaanka DF ee laga keenay magaalada Cadaado.
Rasaas lagu shannaqay gaari ay saarnaayeen isaga iyo ilaaladiisa ayaa waxaa kasoo gaaray dhaawac culus, waxaana weerarkaasi masâ€™uuliyaddiisa sheegtay Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab, halka DF ay sheegtay iney cambaareeneyso.
Rag hubeysan ayaa kheyre ku beegsaday isgoyska Cali kamiin degmada Wardhiigley ee magaalada Muqdihso, waxaana marka oday la dilo caasimadda caan ka noqotay iney dadku is weydiiyaan suâ€™aalo ay kamid yihiin ma xildhibaanada ayuu wax kasoo xulay?
February 27, 2017Â waxaa degmada Boondheere lagu weeraray masâ€™uul ka tirsanaa Bankiga dhexe ee DF oo lagu magacaabo Shire Dhagey, waxaana dhacday inuu isagu ka badbaaday rasaas lagu furay gaarigiisa, balse waxaa ku geeriyooday darawalkiisii, sidoo kale isla maalintaas waxaa askari ka tirsanaa DF lagu dilay xaafadda Suuq-bacaad ee degmada Yaaqshiid.
February 28, 2017 waxa kale oo dhacay weerar lagu dilay masâ€™uul ka tirsanaa maamulka gobolka Banaadir oo lagu magacaabi jiray Cabdiraxmaan Af-leershe.
March 08, 2017 weerar kale oo toogasho ah ayaa ka dhacay degaanka Ceelasha biyaha ee duleedka magaalada Muqdisho. Rag hubeysan ayaa beegsaday C/laahi Kabaweyne oo kamid ahaa ergadii xildhibaanadaÂ ku soo dooratay Galmudug.
Isku soo wada duuboo dhacdooyinkan silsiladda ah ee khasaaraha dhaliyay ayaa dhacay wax ka yar 40 maalmood gudahood ama laga soo billaabo tan iyo markii Farmaajo la doortay oo laga joogo muddo dhowr iyo sodon maalmood ah, tanina waxay muujineysaa fashilka amni ee durbadiiba ku billowday dowladdiisa.
Previous: Bashiir Muxamed Oo Lagu Dilay Magaalada Muqdisho.
Next: Dhageyso Idaacada Andalus Oo Bartamaha Soomaaliya Ka Hirgalisay Xarun Cusub.